Archive du 12-juil-2021
Governemanta Hisolo ny PM, Minisitra 09 hisaorana…
Mangotrangotraka ny toe-draharaha politika, ka mety hisy fiovan-javatra lehibe momba ny governemanta amin’ity herinandro ity.
Maha kivy sy maha ketraka
Izay aleha rehetra, 2023, 2023! Zary lasa mibahan-toerana ny kabary politika misy ankehitriny mihitsy io amin’izao fotoana izao na avy amina fikambanana na antoko politika, eny ao anaty fitondrana.
Boky hafakely ho an’ny ankizy Navoaka ofisialy tetsy amin’ny IFM ny « Aomby »
Tontosa soamantsara ny sabotsy lasa teo tao amin’ny IFM Analakely ny famoahana tamin’ny fomba ofisialy ny boky ho an’ ankizy mitondra ny lohateny hoe :
Fanjakana tsy misy vina Miankina amin’ny facebook sisa
Tsisy programan’asa matotra mihitsy ny Fanjakana ankehitriny. Tsy misy hijerena azy hoe: rahoviana no manao inona fa rehefa miteny sy mivaivay ny kiana ao amin’ny Facebook dia atao.
Faritra Sofia Voasambotra i Jerison lehibena dahalo
Tratra niaraka tamin’ny rahalahiny Tratra afak’omaly sabotsy 10 jolay 2021 tokony tamin'ny 01 ora folakandro i Jarisone dit Jerison jiolahy
“World Rugby Junior Trophy” I Kenya no tafita, tsy nitsanga-menatra ny Malagasy
Resin’i Kenya tamin’ny mokafohy 21-20 ny ekipam-pirenena Malagasy Makis vehivavy sokajy latsaky ny 20 taona tamin’ny lalao farany amin’ny “Barthes Trophy U20” omaly alahady tany Kenya.
Antanimenakely Ampitatafika Jiolahy roa tratra taorian’ny fifampitifirana
Tokatranona mpivarotra iray no notafihan'ny jiolahy tao Antanimenakely ka lasa tamin'izany ny "01 télévision écran plat 32 pouces, 01 amplificateur, 01 lecteur de disque".
Naivo Raholdina “Aza miandry esorina ny minisitra tsy mahavita azy”
Nanao tatitra ho an’ny vahoakan’ny boriboritany fahadimy, izay nosoloin’ireo sefo fokontany sy sefo sektora, tetsy amin’ny kianja maitson’Analamahitsy ny sabotsy teo ny depiote voafidy teny an-toerana, Naivo Raholdina,
Andry Rajoelina Henjana ny tsindry mahazo azy
Tsy misy olobe afaka ny handravona sy handrindra izany, kanefa samy olon’ny fitondrana sy mpanohana ny Filoha ireo amin’ny ankapobeny. Azo heverina ho ady an-tranon’ny fitondrana.
Fangatahana ireo rambon-tany atsimo Tafiditra ao anatiny ireo nosy manodidina
Efa nisy ny fangatahana nataon’I Madagasikara tany amin’ny firenena mikambana mikasika ny tokony hahazoantsika ireo rambon-tany atsimo na “plaque continentale Sud”,
Tarika Iraimbilanja Manasa hi-“rock”
« Ndao i Rock eh ! », io no lohatenin’ny fihaonana anaty trano hiarahana amin’ireo mpankafy na « cabaret » hataon’ny tarika mpiangaly ny Rock Malagasy, Iraimbilanja, ny faha 30 jolay izao
Vaksinin’ny coronavirus Hanafatra Johnson & Johnson 165 600 i Madagasikara
Tamin’ny 10 mey no nanomboka ny fatra voalohany, ary miandrandra ny faharoa iska. Efa miasa amin’izany ny Minisiteran’ny fahasalamana, ary manao izay ahazoana izany.
Barea sy ny Qatar 2022 Miandrandra endrika vaovao ny mpankafy
Nirina Ebobisse, 24 taona, 1,83m, 79kg , lohalaharana afovoany ao amin’ny Portland Timbers, divizionina voalohany ao Etazonia,
Disosezin’i Tsiroanomandidy Tafapetraka ny Eveka vaovao Mgr Gabriel Randrianantenaina
Tafapetraka tamin’ny fomba ofisialy amin’ny maha Eveka vaovaon’ny Diosezin'i Tsiroanomandidy i Mgr Gabriel Randrianantenaina.
Lalàm-pirenena faharoa Ireo tena simba no amboarina
Manomboka ny asa fanamboarana ny làlam-pirenena faharoa (RN2) miainga eo Brickaville ny orinasa voafantina hanao izany, araka ny fampahafantaran’ny Fitantanana Foiben’ny Asa Vaventy.
FITRAMA-HAFARI Hanampy ireo mpatory an-dalana vonon-kiarina
Ankoatra ny asa fitsaboana ny mpiray tanindrazana manoloana ireo karazan’aretina maro samihafa toy ny Variant Delta, ny Covid 19 dia fantatra fa hijery akaiky ireo mpatory an-dalana ihany ny orinasa mpitsabo Malagasy
Politika eto Madagasikara Lasa bizina fangoronan-karena sisa
Isan’ny olana sy tena mahavoa an’i Madagasikara ny tsy ampy kolotsaina ara-politika. Politika foana ny mitondra kanefa lasa mandrakandrana. Hafa mihitsy ilay hoe olona voataizan'antoko,